Zaa, akụkụ nke ebili mmiri na ebili mmiri buru ibu | Netwọk Mgbasa Ozi
Zaa, akụkụ ụfọdụ nke ebili mmiri, na nnukwu ebili mmiri
Mgbe ị na-eche banyere oké osimiri na oké osimiri, ị na-eche ozugbo banyere ụda ebili mmiri na-akụ. Ọ gaghị ekwe omume iche n'echiche osimiri ahụ na-enweghị ebili mmiri. Site na nwata, ha na akuziri anyi na ebili mmiri no n’iru n’iru na nbibi nakwa na ha bu ume n’aghari n’elu oke osimiri.
Taa, anyị ga-amata ihe niile metụtara zaa, akụkụ nke ebili mmiri na nnukwu ebili mmiri edebanye aha n'ụwa niile. You chọrọ ịmatakwu banyere ịrụ ọrụ nke oke osimiri na oke osimiri?
1 Egwuregwu ebili mmiri
2 Mpaghara ebe ọzara na-apụta
3 Akụkụ nke ebili mmiri
3.1 Mmiri mmiri ka dị
3.2 Crest nke ebili mmiri
3.5 Ogologo ebili mmiri
3.7 Oge ole
4 Nnukwu ebili mmiri
Egwuregwu ebili mmiri
Dika amaraworị, ifufe na-ebute ọgbọ nke ebili mmiri na-aga n'elu mmiri nke oke osimiri na oke osimiri na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ mmiri. Na mgbakwunye, ebili mmiri na-emetụta n'ụzọ dị mkpa mmeghari nke mpaghara ala gbara osimiri okirikiri. Dabere na ụdị aza na a n'ụsọ oké osimiri, ọ ga-ewe otu ụdị ma ọ bụ ọzọ.
Ejiri ebili mmiri dị iche iche dị iche iche dabere na ebe na ike ha ji kpụọ ya. Nke mbu bu ogbu mmiri miri emi nke a na-emepụta n'ebe oke osimiri dị ala nke ukwuu ma ọ dịghị emetụta ihe ọ bụla nke ọgbọ na ikike nke ebili mmiri ahụ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere osimiri ebili mmiri nke mophology nke oke osimiri n’atu a dika o pere mpe.
Ebili mmiri bụ ebugharị ebili mmiri, oscillations oge nke elu mmiri, nke ejiri kristal na depressions na-agagharị agagharị. Ihe eji mara ha bu nke ha ogologo, oge, mkpọda, elu, njupụta, na ọsọ nke mgbasa.
Ebili mmiri na-agbanwe agbanwe nke ukwuu iji nwee ike nyochaa na ịkọwa ya. Ya mere, a na-eji usoro ndekọ ọnụ ọgụgụ. Mmiri mmiri dị omimi na-emegharị mmegharị oge niile nke oke osimiri na oke osimiri nke anyị na-akpọ aza nke ịdị elu nke ebili mmiri ahụ dị obere na njikọ nke ogologo ebili mmiri. Ọfụfụ ahụ na-agbasa n'oké osimiri, na-eru ebe dị anya site na mmalite.
Mpaghara ebe ọzara na-apụta
Mpaghara kachasị ebe ebili mmiri bụ ebe Ifufe na-ada site na odida anyanwu na mpaghara ebe di omimi ma ugwu ahu. Na mpụga mpaghara ndị a, enwere naanị otu mpaghara dị mkpa na ọgbọ na-efegharị. Ọ bụ Arebia Sea. Na mpaghara a, n’oge ọnwa nke ọnwa Juunu, Julaị na Ọgọst, e nwere oke azịza ọjọọ nke udu mmiri na-ebute.
O siri ezigbo ike na ikuku ahia iji mee ka ebili mmiri buru ibu. O sina dị, okpuru mmiri nke okpomoku na-eme ebili mmiri siri ike nke odighi adi. Imirikiti ebili mmiri ndị a hụrụ na mpaghara ndị etiti na-esite na mpaghara nke ugwu ndị dị elu ma gbasaa kpamkpam ọtụtụ puku kilomita.
Mpaghara ebe ikuku ikuku dị elu na-ebili ebili mmiri na oke ọrụ. Eriri mmiri ozuzo nke ndịda bụ mpaghara nwere ike iwepụta ebili mmiri kachasị ukwuu, ebe ọ bụ na edere ifufe kachasị ike na nke na-adịgide adịgide.
Akụkụ nke ebili mmiri
N’agbanyeghi na anyi ma etu mmiri suru na etu o si aru oru n’ihe gbasara igba osiri na ikuku ikuku, anyi enweghi ike iguzo ebe ahu. Mgbe ebili mmiri na-ebugharị, a na-ekewa ya n'ọtụtụ akụkụ.
Mmiri mmiri ka dị
Ahịrị a kwekọrọ na oke osimiri mgbe ebili mmiri anaghị emetụta ya. Nke a bụ ahịrị a na-ewere dị ka nrụtụ aka n'oké osimiri ruo ogologo oge ka ọ bụrụ, mgbe ebili mmiri ahụ mere, a ga-agbakwunye elu nke ebili mmiri ma wepụ ya n'ihe metụtara nha ahụ. Akara mmiri a ka akara n'etiti etiti mmiri miri emi ma dị ala mgbe ebili mmiri ahụ dị n'ụsọ oké osimiri.
Crest nke ebili mmiri
Ikekwe nke a bụ akụkụ kachasị mara mmadụ niile. Ọ bụ ebe kachasị elu nke ebili mmiri ahụ. A maara ya nke ọma maka ndị na-awagharị mmiri ma jiri mmiri na-acha ọcha na ụfụfụ na-amata ya mgbe ebili mmiri malitere ịgbada wee daa.
Ọ bụ ndị na-abụghị nke crest nke ife. Ọ bụ ya dịkarịa ala ebe. Iji lee ya, a ghaghị ịhụ ebe kachasị dị ala n'etiti ebili mmiri abụọ.
A na-enwekarị mgbagwoju anya site na crest. Agbanyeghị, ịdị elu nke ebili mmiri ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti etiti na ndagwurugwu. Ihe ebe dị anya ahụ bụ ogo nke ebili mmiri ahụ.
Bụ ihe ị tụrụ kehoraizin tere aka n’etiti ebili mmiri abụọ. Enwere ike ịtụ nha n'etiti etiti na crest ma ọ bụ ndagwurugwu na ndagwurugwu.
Oge ebili mmiri bụ nke na-atụ ihe oge na-eme n’agbata otu ife na ebili mmiri ọzọ. A na-eme nha a site na ịhọrọ oge a kapịrị ọnụ na ịgbakọ oge ọ ga-ewe maka oghere nke ife ahụ gafere na nke abụọ. A na-atụkwa oge a site na ndagwurugwu ruo na ndagwurugwu.
Frequency yitụrụ yiri oge, ma na ihe dị iche na ọ bụ nanị akara n'ihe nke ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke mmiri na ebili mmiri na-agafere a kwuru mgbe kwa nkeji.
Njupụta bụ ebe dị anya n'etiti akara mmiri mmiri na oghere nke ebili mmiri ahụ. I nwere ike ịsị na ọ bụ ịdị elu nke etiti ebili mmiri ahụ.
Nnukwu ebili mmiri
N’akụkọ ihe mere eme niile, e nweela nnukwu ebili mmiri ndị mebiri ọtụtụ ihe. Ma olee otu esi esi guzobe oke ebili mmiri?
Ka ụdị ebili mmiri ndị a nwee ike ịdị, achọrọ ifufe siri ike iji mepụta ngagharị nke oke osimiri na usoro mmiri mmiri zuru oke. Ọ bụrụ na mmiri mmiri nwere ịda mba dị kilomita ole na ole miri emi (dị ka egbe ala) ebili mmiri ahụ ga-enwe ike iru oke osimiri ya na ike ya niile, ebe ọ bụ na ọ naghị efunahụ ike n'ihi esemokwu na-aga n'ihu na ala.
N’ụzọ dị otú a, a pụrụ imepụta nnukwu ebili mmiri nke na-aghọ ihe ịma aka nye ndị hụrụ sọfụ.
Site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ntakịrị banyere oke ebili mmiri nke oke osimiri anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Zaa, akụkụ ụfọdụ nke ebili mmiri, na nnukwu ebili mmiri
Angelica Snow dijo
Ihe ha na-ekerịta dị ezigbo mma ma na ọ bara ezigbo uru ịkụzi n’ihi na ha nwere ozi, eserese na ederede ha nwere nghọta maka onye ọ bụla gụrụ.
Zaghachi Angelica Snow